Burma Partnership » We Used to Fear Bullets Now We Fear Bulldozers
By Dawei Development Association, Tenasserim River & Indigenous People Networks and Tarkapaw Youth Group • October 30, 2015
In Yangon today, three Dawei-based civil society organizations launchedanew report, based on more than two years of research and community-engagement, condemning the destructive coal mine at Ban Chaung. The report, Ban chaung coal mining report 2015 – English, documents the devastating impact that coal mining has had on the local environment, community health, traditional livelihoods, and unique indigenous way of life in this recent conflict-zone in Tanintharyi Region of Southern Myanmar, and also raises warning flags about how large-scale mining projects in Maynmar are permitted and regulated. It was published jointly by the Tarkapaw Youth Group, Dawei Development Association (DDA), and the Tenasserim River & Indigenous People Networks (TRIP NET).
ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး ၂ နှစ်ကျော်ကြာသုတေသနပြုထားချက်များကိုအခြေပြုရေးသားထားသောအစီရင်ခံစာသစ် တစ်ရပ်ကို ထားဝယ် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းသုံးခုကယနေ့ ရန်ကုန်တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်ရင်းပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းဖြစ်စေသောဘန်းချောင်းရှိကျောက်မီးသွေးတွင်းကိုရှုပ်ချလိုက်သည်။ “ကျည်ဆံတွေကိုကြောက်လန့်ခဲ့ရဖူးတယ်။ အခုတော့ဘူဒိုဇာတွေကိုကြောက်နေရပြီ”အမည်ရအစီရင်ခံစာတွင် မကြာသေးမီအထိပဋိပက္ခနယ်မြေဖြစ်ခဲ့ဖူးသော မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိအဆိုပါ ကျောက်မီးသွေးတွင်းကြောင့် ဒေသခံများ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာရေး၊ ရိုးရာအသက်မွေးမှုများ၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသားတို့၏ သီးခြားလူနေမှုဘ၀ဟန်ပန်များ ထိခိုက်ဖျက်ဆီးခံရခြင်းတို့အကြောင်းမှတ်တမ်းပြုစုထားသည်။ ယင်းအပြင် ထိုအကြီးစားကျောက်မီးသွေးတွင်းကိုခွင့်ပြုချက်ပေးထားပုံ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချ စီမံကွပ်ကဲနေပုံတို့အပေါ်လည်းမေးခွန်းထုတ် သတိပေးထားသည်။ အစီရင်ခံစာကိုတာကပေါလူငယ်အဖွဲ့၊ ထားဝယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (DDA)၊ တနင်္သာရီမြစ်မကြီးနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများကွန်ရက် (TripNet) တို့ကထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
Tags: Business and Human Rights, Crimes against humanity, Dawei Development Association, Displacement, Environmental and Economic Justice, Human Rights, Tarkapaw Youth Group, Tenasserim River & Indigenous People Networks